“मेरो वडामा धेरैको नागरिकता छैन, खानेपानीको चर्को समस्या छ, केही वडाबासी टुकीको भरमा छन् ”
By vijayafm on	 August 29, 2017 अन्तरवार्ता, फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय
तस्वीर ः समृद्धि मिडिया हाउस
गैँडाकोट नगरपालिकाको एक मात्र महिला वडा अध्यक्षका रुपमा कोकीसरा रानामगर पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । रानाले वडाको विकासका लागि जनप्रतिनिधि हुनु भन्दा पहिलेदेखिनै काम गर्दै आउनुभएको छ । गैँडाकोट १४ मा खानेपानी, विद्युत, जनचेतनाको अभाव नै वडाको विकासका लागि चुनौती रहेको कोकीसरा रानामगरको भनाई रहेको छ । आफ्नो वडाका विकासका लागि कोकीसरा रानामागरसंग के कस्ता योजना रहेका छन् । प्रस्तुत छ सम्पादक श्रीधर उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
अहिले के कस्ता काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले आफ्नो वार्डको वडा कार्यालयमा गएर जनताका गुनासो सुन्ने काम गर्दिने, अनुगमन गरेर जनताका समस्या बुझ्ने काम गरिरहेको छु । यस्तै काममा व्यस्तता छ भन्नु पर्दछ ।
वाड नं. १४ का समस्या के के छन् ?
मेरो वडामा प्रमुख समस्या भनेको खानेपानीको समस्या छ, विजुलीको समस्या छ, रतनपुरको साविक वडा न. ६ जोडिएपछि त्यस वडामा विजुलीको समस्या छ, ४० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले पनि नागरिकता बनाएका छैनन् । अहिले ठूलो उमेरका केही व्यक्तिले नागरिता बनाउन आग्रह गरेपछि मात्र बनाएका छन् । जन्मेको ३० वर्ष भइसक्यो जन्मदर्ता छैन । नागरिकहरुमा चेतनाका कमिका कारण यी समस्या देखिएको छ ।
वाड नं. १४ का कुन कुन स्थानमा यस्तो समस्या छ ?
केही तीन चारवटा भेग छन्, नगर टाँडी, सालघारी, भागर भन्ने ठाउँ छ । भेल्लन टाँडी भन्ने ठाउँ छ जुन अलिकति हाम्रो क्षेत्रमा पर्दछ, यसमा केही सचेतना देखिन्छ । अरु क्षेत्रमा लामोसमयसम्म पनि जन्मदर्ता, नागरिकता, मृत्युदर्ता लामोसमयसम्म पनि नगर्ने संस्कार विकसी त भएको छ ।
समस्या समाधानकालागि के काम गर्ने त ?
अहिले आफू निर्वाचित भएको तीन महिना भयो, पहिलो यी समस्या राम्रो संग नजर अन्दाज गरिएको थिएन, अहिले समस्याहरु केलाउँदै जाँदा यी समस्या देखियो । अहिले मेरो आफ्नो पहलमा वडा सदस्यहरुलाई नागरिकता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता गर्नुपर्ने कारणका विषयमा चेतना फैलाउन भनेको छु ।
अहिले कति मानिसहरु नागरिकता विहिन छन् ?
केही दिन पहिले १०–१५ जना मानिसले नागरिकता बनाएका छन् । म आएपछि उनिहरुलाई नागरिकताको महत्व र आवश्यकताका विषयमा सम्झाएको थिएँ । अझै पनि मेरो वडामा २५ प्रतिशत मानिसहरुको नागरिकता छैन, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता गर्नेको संख्या पनि धेरै रहेको छ ।
चेतना अभिवृद्धिका लागि के कस्तो काम गर्नुपर्ला ?
चेतना अभिबृद्धि गर्ने काम नगरपालिकाबाटै होला । बजेट विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने छ । असोज महिना लागेसंगै प्राथमिकताका आधारमा सचेतना फैलाउने योजना बनाएका छौँ ।
बाटोको अवस्था के छ ? सडक सुधारका योजना के छन् ?
सबै भन्दा पहिले भागर जोडीएको रतनपुरको साविक ६ नम्बरमा पुलको आवश्यकता छ । पुल बन्यो भने भागर र नगरटाँडीमा राम्रो सम्बन्ध बन्थ्यो । आवतजावत सजिलो हुने थियो । यो गोरेटोले हरेक सुविधा वडा बासीले पाउँछन् । भागरमा साइकल हिँड्ने गोरेटोसम्म छैन । भागरको तल्लो क्षेत्रमा पिच भएका छन् भने माथिल्लो क्षेत्रमा पीच गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस क्षेत्रमा एउटा घर एउटा डाँडामा छ भने अर्को घर अर्को डाँडामा छ । एकीकृत बस्ती नभएका कारण पनि सबै स्थानमा सडक सञ्जालको समस्या चुनौती जस्तो समेत देखिन्छ । तर वडा बासीको सहजताका लागि कसरी हुन्छ काम भने अवश्य गर्ने पर्दछ ।
भागर र नगरटाँडीका लागि अहिले बजेट बिनियोजन भएन ?
भागरको पुलका लागि अहिले टिपोट गरिएको छ । पछि यसलाई प्राथमिकता दिने गरि सूचिवद्ध गरेका छौँ । अहिले सालघारी र मटकुरीको बीचमा टाउन खोलाको पुल रहेको छ । यो खोला बढेको बेलामा स्थानीय विद्यार्थीहरु समेत पढ्न नपाउने देखिन्छ । खोलाआरपार गर्न बालबालिका विद्यार्थीका लागि निकै सास्ती देखिएको छ, निकै चुनौती देखिएको छ । म जनप्रतिनिधि नहुने बेला देखि नै यस क्षेत्रमा केही आवश्यक पुलका लागि बजेटका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । यस अघि नगरपालिकाको बजेट बाँडफाँड गर्ने समितिको सदस्य समेत रहेको थिँए । त्यसबेला देखि नै मैले काम गर्दै आइरहेको हो । त्यतिबेला रतनपुरको साविक ६ नम्बर वडा मिसिएको थिएन । त्यतिबेला उठाएको कुरा अहिले बल्ला पारित भएको छ । यो पुलका लागि दुई करोड जति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष करिब एक करोड जति बजेट बिनियोजन गरेका छौँ ।
अरु बाटाहरु कुन कुन छन् ? जहाँ बाटोका लागि रकम बिनियोजन गरिएको छ ?
अहिले भेल्लन टाँडीबाट नगरटाँडी जाने बाटो पिच भएको छैन । मेरो वडामा धेरै बाटोहरु पिच भएका छैनन् । बाटोघाटोको पिचको लागि २५ लाख रुपैँया छुट्याइएको छ । अहिले वडाका लागि करिब ४३ लाख रुपैँया विकास बजेटका लागि छुट्टिएको छ । यसको सबै बाटोमा समुचित रुपमा खर्च गर्नेछौँ ।
यहाँको वडाको अर्को समस्या, विजुली बत्तिको अभाव, रतनपुरको कति क्षेत्रमा बत्ति छैन ?
झरे खोलाको छेउ तिर पर्दछ यो क्षेत्र जसलाई सिमलटाँडी भनिन्छ । त्यहाँ नम्बरी जग्गा नै छ । १०÷१५ घर छ । वरिपरि जंगल छ । यस क्षेत्रमा टुकीको भरमा जिवन विताइरहेका छन् ।
त्यहाँ बत्ति लैजान कति पोल आवश्यक होला ?
अहिले त्यहाँ २५ वटा मात्रै पोल भयो भने विजुली लैजान सकिन्छ । पहिले जनप्रतिनिधि नभएका कारण त्यहाँका जनता चुप रहेका थिए । कसलाई भन्ने कहाँ गएर भन्ने समस्या उहाँहरुलाई थियो । अहिले चाँहि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरुले बारम्बार विद्युतका लागि भनिरहनुभएको छ । पोल नभएका कारण नै अहिलेसम्म त्यहाँका स्थानीय टुकीको भरमा जिवन यापन गर्न बाध्य रहेका थिए ।
अरु क्षेत्रमा बत्ति पुगेको छ ?
छन त छ, तर व्यवस्थित छैन । ट्रान्सफर्मरको समस्या छ । ट्रान्सफर्मर सानो कम पावरको भएकाले समस्या भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणसंग पहल गर्नुभाछ ?
गरिरहेको छु । बोरिङका लागि एउटा ट्रान्सफर्मर ल्याइएको छ । यसमध्ये जनताका लागि बोरिगंका लागि हुने गरी ट्रान्सफर्मर ल्याइएको छ । नगरसंग पनि कुरा गरिरहेको छु ।
खानेपानीको निकै ठूलो समस्या पनि रहेछ तँपाईको वडामा ?
तारानगर खानेपानीमा अहिले समस्या देखिएको छ । सालघारीमा समस्या छ, भागरमा पनि खानेपानीको समस्या छ । अमरापुरी खानेपानीले तलको भागलाई प्रयाप्त पुर्याएको छ ।
समस्या समाधानका लागि के गर्ने ?
अब अहिले नगरटाँडीमा धेरैको योजना चाहिन्छ । पहिले खाइरहेको पानी भूकम्प आएपछि समस्या देखियो । नगरटाँडीमा तीनचारसय घरधुरी पानीको अभावमा रहेको छ । पहिले धेरै जसो स्थानीयले इनार खनेर आफ्नो खानेपानीका लागि आपूर्ती स्वयं गरिरहनुभएको थियो । कतिपयले मुहानबाट आएको पानीबाट जीवन गुजारीरहनुभएको थियो । भूकम्पपछि इनारका मुहान पानीका स्रोतहरु पनि बन्द भएका छन् ।
पहल के गरिरहनुभएको छ ?
यस विषयमा नगरले पनि सोचिरहेको छ । एउटा खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पनि आइपुगेको छ । नगरटाँडीका मानिसहरुलाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि तीन चार करोडको लगानी गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ।
कति समयपछि सबै वडा बासीले सुरक्षीत खानेपानी पिउन पाउलान् ?
भर्खरै मात्र आएकी छु । सरकारले पनि सिंहदरबारको अधिकार टोलमा आउने भनेको छ । दुई तीन वर्ष लाग्ला । त्यसपछि केही भएपनि मेरो वडामा खानेपानीको समस्या कम होला भन्ने लागेको छ ।
गैँडाकोटमा रामलीलाले मर्यादाको पाठ पढायो
गैँडाकोटमा गरियो ९ मातृ शक्तिको सम्मान
गैँडाकोटमा पहिलो पटक रामलिला सुरु
atithiti devo06 29&30 final by rajendra Dipendra Dhungana
October 16, 2018 | 14 min 51 secs
October 11, 2018 | 25 min 45 secs
October 11, 2018 | 26 min 51 secs
October 11, 2018 | 26 min 57 secs
खबर खोज्नुहोस Select Month October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 July 2015
मुटुको बाइपास सर्जरी भनेको के हो?
गैँडाकोट ३ का महिला भन्छन् “कि बाटो चाहियो, कि सुरक्षित उपचार”
उद्योगी व्यवसायीलाई मूलुकी देवानी संहिता ऐन सम्बन्धी प्रशिक्षण
कावासोती १६ मा आज बिहान भएको दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ३२ जना घाईते
फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि सामुदायीक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
फलफुल व्यापारीहरुले गरे नगर प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी
नवलपुरमा केहि दिनमा यात्रुको सहजताका लागि यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरिने
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, सरकारप्रति नै शंका छ : स्थानीय
दसैँको मुखमा चितवनमा खाद्य सामग्रीको मूल्य आकासियो, उपभोक्ता मारमा
गृहमन्त्रीको खुलासा : निर्मलाको कपडा जलाइयो, मुचुल्कामा बुबाको औंठाछाप नक्कली
एसिया कप क्रिकेटमा फाइनल प्रवेशकालागि पाकिस्तान र बंगलादेश खेल्दै
कावासोती नगरपालिका १६ हरबासी डण्डामा एक महिला माथि एसिड र छुरा प्रहार
नेपाल प्रेस युनियन नवलपुर शाखाको अध्यक्षमा विरेन्द्र पराजुली चयन (निर्वाचित सम्पुर्ण सदस्यको नामावली सहित)
गैंडाकोट जेसीजले जेसीज सप्ताह–२०७५ भव्यताका साथ मनाउने
गैंडाकोट १० मा भएको सवारी दुर्घटनामा ९ जना घाईते, ८ जना देवचुली १६ एउटै वडाका (घाईतेको नामावली र उनिहरुको अवस्था सहित)
आदर्श आमा समूह गैंडाकोट १२ को अध्यक्षमा पुनः केसी चयन
नेपाल प्रेस युनियन नवलपुरको १० औं अधिवेशन चल्दै, वामपन्थीहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरे ः डा. कोईराला
चितवनको आनन्दपुरमा श्रीमद् भागवत धन धान्याचल विराट महायज्ञ हुदैं
गैंडाकोट १० सम्झना चोकमा ट्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार एक युवती गम्भिर घाईते
निराजन र प्रविशाको ‘बिस्तारै बिस्तारै’ गीत रिलीज